Kaftanka Maanta , SNM Bidhaan May Ahayn Bidhaan Isu Muuqata.
Kaftanka Maanta , SNM Bidhaan May Ahayn Bidhaan Isu Muuqata.
Friday July 21, 2017 - 16:52:44 in by Samiir Cabdi
Saaxiibkayga aanu kaftan wadaaga nahay ee Xuseen Badhaani ku garan ogtihiin ayaa shalay yidhi , Axmed Taariikhda snm wuxuu kusoo koobaa Dhooba­guduud ilaa Cadaadley ilaa Aadan­ Maanyare , isagoo kuwo cusubna ina baraya , ana waan ka aamusaa . Hadaba isagoo biyo dhaciisu ahaa qodob aanu shalay ka doodnay oo ku saabsanaa saraakiisha xisbiyada qodobkan kama aan hadlin , hassa yeeshee maanta ayaan saaxiibkay qodobkan jeclaystay inaan hadlo . Saaxiib Snm sidaan u fahansanahay waxay ahayd Halgan balaadhan , waxaana ku jiray shacbi badan, Labadeena oo aan ka mid ahayn ururkii snm iska daaye , xitaa snm tii ayaan is wada aqoon, layaabka magacyo cusub oo aanad maqal aad la yaabtayna waxay muujinaysaa in aad inta aad maqashay uun aad u taqaanay , laakiin waxaan ku leeyahay inta aan ku barro iiga mahadnaq , inta badan ee aynaan aqoona raadi , hana layaabin snm in lawada maqlo way ka badnayde . Qodobka labaad , haddii dhawr magac oo horre kugu cusbaayeen, maantana kuwo horrle ayaan wadaaye iga hano . 1­ Sanadii 1995 , horaantiisii waxaan la kulmay oday gaaban oo cas oo reer miyi ahaa , waagaas .
Odaygaasi , wuxuu ahaa nin sheeko badan , oo kaftan aqoona , inta badana meesha uu fadhiyo ayaa laggu soo xoomi jiray . Ninkaasi wuxuu ka tirsanaa ururkii snm , ururkiisii ciidan ee ugu horeeyay , waxaanu noqday askarigii 18 aad ee laggu diiwaan­geliyay Maxamed Ali watara .waagii dambe wuxuu caan ku noqday sheekooyinka qosolka maada iyo xikaayaadka waa halkii wejiye , isagoo jabhada maaweelin jiray , iyaga iyo dadkana dhex­dhexaadin jiray . Magac lagga miskiin maahee , Waa ninkii ay ku baxday Hawraarta caanka noqotay ee odhan jirtay , Maneenada kii macnayn jiray iyo , Xagguu maray muuse Iidaan . Mujaahidka aan ka sheekeyey waa oday Muuse Iidan oo geeridiisa aan maqlay , taariikh badana lahaa , markaa hadaanad horre u maqal kana intii aan ku baray ku darso . 2­ Sanadihii 2002 , waxaanu Maqaaxida la yidhaahdo Al­sacaada ee Ka danbaysa Misjid Jaamaca Hargaysa aanu wada fadhiisan jiray , Col C/kariin Maxamed . C/kariin wuxuu ahaa sarkaal ka tirsanaa ciidankii Soomaaliya ee Gaaska 3aad ee Burco , waxaanu ahaa madaxda Madaafiicda Goobta ee Magaalada Burco . C/kariin markuu saluugay qaabka Talisii M S Barre wax u waday , wuxuu ku biiray Ururkii Snm , in badana wuu soo dagaalamay , waxaanu ka mid ahaa , Saraakiishii Guutada 8aad , in badana wuxuu ka qayb galay dagaaladii Hawdka Burco ee 90 kii . C.kariin hadaba Mujaahidiinta kale wuxuu kagga wada duwanaa wuxuu ahaa , Nin Mareexaana , Reer Diiniya , oo waliba kasii ah , Reer Ugaas Kooshin , dhawaan buu geeriyooday alle ha u naxariistee , isna ma iga haysaa . 3­ Sanadii 2009 , waxaan Magaalada Ceergaabo kula kulmay nin iiga waramay Taariikho badan oo cajiiba .
Wuxuu iiga sheekeeyay inuu ka tirsanaa qoladii Maraakiibta Ruushku leeyahay ee Soomaaliya u socotay ee shiidaalka qabatay 1990 , waxa kale oo iiga waramay in uu ka qayb galay dagaaladii la odhan jiray Ceergaabo (1’2) iyo kuwo kale oo badan ka dhacay Bariga Ceergaabo sidda Yuube,Jiidali , Kulmiye iyo Xiin­galool . Ninkaasi waa nin caan ka ah deegaanada Bariga Somaliland , gaar ahaan Burco ilaa Ceergaabo , Magaciisana waxaa la odhan jiray Maxamuud Jikraale , waxaanu ka tirsanaan jiray Ciidankii la odhan jiray Sayd cali ee markii dambe u wareegay Ceergaabo , markaa bal isna ku darso ogaalkaaga qaar kaloo badana waan soo wadaaye , filasho wacan .